Homeसमाचारगर्भावस्थामा केरा खाँदा छोरा जन्माउने सम्भावना धेरै
August 29, 2020 admin समाचार 17200
पितृ सत्ता’त्मक देशमा छो’राको महत्व धेरै हुन्छ । जति धेरै शिक्षित परिवार भएपनि छोरा र छोरीबी’चको विभेदको कुरा बाहिर आउने गरेको छ ।
धेरैले छो’राकै चाहा’नाका कारण पारि’वारिक सम्बन्ध विगारेका पनि छन् । छोराको चाहाना राखेकै कारण गर्भपतनको क्रम पनि बढेको छ ।
तर, यस्ता केही सोच र भनाईहरु छन् जसको प्रयोग’ले छोराको रहर पुरा हुन्छ । एक अध्ययन’को नतिजा अनुसार तपाईंलाई हामी भन्दैछौं केरा खाए छोरा जन्म’ने सम्भावना हुन्छ । तपाईं पत्याउनुहुन्छ?
संसार भर एउटा मान्य’ता रहि आएको छ- गर्भवती हुने समय र भइसकेपछि दैनिक रुपमा अत्यधिक मात्रा’मा केरा खाए छोरो जन्मन्छ । अनि त्यही समयमा दुध बढी सेवन गर्‍यो भने बच्चा गोरो जन्मिन्छ भन्ने मान्यता छ ।
यही मान्य’तालाई आधार मानेर विज्ञहरु अनुसन्धा’न गरेका छन् । अक्स्फोर्ड बिश्वविद्यालय’का बिद्वानहरुले गरेको अध्ययन अनुसार, केराको सेवन बाट छोरा हुने सं’भावना केही बढी देखिएको छ ।
यसको लागि विद्वा’नहरुले ७ सय ४० जना गर्भवती महिलाहरुलाई सहभागी गराएर अध्ययन गरेका थिए । सहभागीहरु महिलाहरु मध्ये जसले धेरै क्यालोरी’युक्त खाना वा केरा खा’एका थिए, उनीहरुको छोरा भएको थियो ।
त्यसैगरी कम क्यालो’रियुक्त खाना खाने र थोरै केरा खानेको भने छोरी भएको अनुसन्धा’नबाट देखिएको थियो ।
अनुसन्धानक’र्ताहरुका अनुसार, केरामा पोटासि’यमको मात्र धेरै हुन्छ, जसले लिङ्गको लम्बाइ बढाउन समेत मद्धत गर्छ । तर, उनीहरुको अध्यय’न अनुसार, केरा खाँदा छोरा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशत हुन्छ । त्यसैगरी गर्भव’ती हुँदा छाती बढि पोल्छ भने रौं धेरै भएको बच्चा जन्मने कुरा पनि बैज्ञानिक अनुसन्धा’नले पुष्टि गरेको छ ।
‌खबर हब बाट साभार
पल शाह आजै धरौटी तिरेर छुट्न सक्ने ?
March 24, 2022 admin समाचार 1195
बालिका कर णीको अभि`योगमा प्रतिवादी बनाइएका अभिनेता पल शाहविरु`द्धको थुनछेक बहस बिहीबार पनि नसकिने सम्भा`वना बढेको छ । पलको पक्षमा बहस गर्न ९ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका कारण बिहीबार पनि बहस सकिने सम्भा|वना कम
May 26, 2021 admin समाचार 5443
May 1, 2021 admin समाचार 6374